सुनिल ग्रोवर किन आए सुटुक्क नेपाल ? - Seto Khabar सुनिल ग्रोवर किन आए सुटुक्क नेपाल ? - Seto Khabar
सुनिल ग्रोवर किन आए सुटुक्क नेपाल ?
भारतिय कलाकार सुनिल ग्रोवर नेपाल आइपुगेका छन् । शुक्रबार सोल्टी होलमा हुने एक ब्रान्ड शोको लागि उनी नेपाल आएका हुन् । उनले पशुपतिनाथ परिसरमा उभिएर बाबासँग खिचाएको तस्बिर आफ्नो सोसल साइट ईन्स्टाग्राममा पोस्ट गरेका छन् ।
सुनिलसँगै उक्त भिआइपी शोमा नायिका स्वस्तिमा खड्का, हेमन्त राना लगायतले आफ्नो प्रस्तुती दिनेछन् भने शोलाई नायिका रिमा विश्वकर्मा र सञ्चारकर्मी नरेश भट्टराईले होस्ट गर्नेछन् । शो निकै नै गोप्य तरिकाले आयोजना गरिंदैछ ।